Ciidanka difaaca Puntland oo soo gabagabeeyay howlgalkii ka socday dhulka buuraha gobolka Bari. – RadioQandala.com
Ciidanka difaaca Puntland oo soo gabagabeeyay howlgalkii ka socday dhulka buuraha gobolka Bari.
Posted on 24 November, 2017 by RadioQandala
Ciidanka Amniga Puntland (PSF) oo ay weheliyaan ciidamada Badda Puntland (PMPF) iyo ciidanka Daraawiishta Puntland ayaa soo geba-gebeeyey hawlgallo dagaal oo ka dhan ah ururka argagixisada Daacish oo ay afartii maalmood ee la soo dhaafay ka wadeen Buuraha Cal Miskaat ee gobolka Bari, gaar ahaan aagga Deegaanada Canjeel, Dhaadaar, Dhasaan, Buq, Toox iyo Bohol ee u dhexeeya Balidhidin iyo Qandala.
Hawlgalkan ay ciidamada Puntland ka fuliyeen Buuraha Cal Miskaat ee gobolka Bari ayaa bartilmaameedkiisu ahaa sidii ay Daacish uga saari lahaayeen deegaanada ay kaga dhuumaalaystaan Buuraha Cal Miskaat ee gobolka Bari.
Intii hawlgalkani socday ciidamada Puntland waxay Daacish ka saareen goobo ay kaga dhuumaalaystaan Buuraha Cal Miskaat oo hoostaga degmada Qandala ee gobolka , isla mar ahaantaana waxay ciidamadu ka gubeen cadowga Daacish godad raashin ugu kaydsanaa, waxayna burburiyeen saldhigyo ay ku dhuumaalaystaan ururka argagixisada Daacish oo ku yaal aaggaas, waxaana laga qabtay qalab ay ku samayn jireen waxyaalaha qarxa.
« MAANTA OO SHACABKA Bosaso GUBEEN CALANKII IMAARAADKA
MARAYKANKA OO KA JOOJIYAY TAAGEERADII DHAQAALE IYO HUB IYO CUNO CIIDAMADA MUQDISHO KA DIB IN UU JIRO MUSUQMAASUQ WEYN »